Wafti-Sare Oo Deeq Bixiyayaal Ah Oo Lagu Soo Dhaweeyay Magaalada jigjiga - Cakaara News
Wafti-Sare Oo Deeq Bixiyayaal Ah Oo Lagu Soo Dhaweeyay Magaalada jigjiga
Jigjiga(cakaaranews)Khamiis 27ka July 2017. Wafti balaadhan oo kakooban deeq bixiyayaasha caalamigi ah islamarkaana ay horkacayso wakiilka guud ee qaramada madoobay u fadhida dalkeena itoobiya ahna iskuduwaha hawlaha baniaadanimada oo ay waheliyaan masuuliyiinta hay’ada OCHA, WFP iyo masuuliyiin kale ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee garaad wiiwaal ee magaalada jigjiga.
waftigan ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee garaad wiilwaal kusoo dhaweeyay Wasiirka Xafiiska Kahoraga iyo U Diyaargarawga Masiibooyinka DDSI mudane Xuseen Maxamed Xasan iyo Lataliyaha Madaxwaynaha DDSI ee dhinaca Xaquuqul insaanka iyo Xidhidhka Caalamiga ah ahna Wasiir Kuxigeenka Xafiiska Kahortaga iyo U diyaargarawga Masiibooyinka mudane Anwar Cali. Soodhawayn kadibna, waftiga iyo masuuliyiinta ayaa nasasho gaaaban oo xogwaraysi ah kuwada qaatay guriga nasashada ee garoonka.
Hadaba, Wasiirka Xafiiska kahoraga iyo U diyaargarawga Masiibooyinka DDSI mudane Xuseen Maxamed Xasan oo kawarbixyay ujeedooyinka waftigan ayaa sheegay in waftigani kakoobanayhay deeqbixyayaal caalami ah islamarkaana ay horkacaysowakiilka guud ee qaramada madoobi u fadhida dalkeena itoobiya ahna iskuduwaha hawlaha baniaadanimada marwo ahuna. Wauxuuna intaa kudaray wasiirku in ay waheliyaan masuuliyiin kasocto laamaha hayada UN oo ay kamid yihiin OCHA, WFP. Islamarkaana ujeedadoodu tahay ukuurgalida dhanka saamayntii abaarta iyo sidii looola tacaali lahaa.
Iskusoowada duuboo, waftigan ayaa lafilayaa in ay kulama kaladuwan oo kuqotama dhanka latacaalida abaaraha laqaadan doonaan masuuliyiinta deegaanka.